Daawo: Qaabka Madaxweyne Xasan shiikh uu u Sagootiyay Guddiga la socon Doona Dacwada Dhanka Badda ee uu dhaxeya Soomalia iyo Kenya – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Qaabka Madaxweyne Xasan shiikh uu u Sagootiyay Guddiga la socon Doona Dacwada Dhanka Badda ee uu dhaxeya Soomalia iyo Kenya
by Tifaftiraha K24 18th September 2016 18th September 2016 027
Madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan Sheakh Maxamuud ayaa xalay sagootiyey guddi korjoogto ah oo tagi doona Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ) ee ku taala magaalada Hague ee dalka Holland.
Guddigaan ayaa halkaasi u tagi doonaa sidii ay ula socon lahaayeen dacwada Badda ee u dhaxeysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo la filayo in maalinta barito ah ay dib uga furanto magaalada Hague ee dalkaasi Holland.
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheakh Maxamuud ayaa muujiyey sida dowladda Soomaaliya ay ugu kalsoontahay in ay ku guuleysato dacwadaasi, maadaama Soomaaliya si sharci ah ay u martay dacwada la xiriirta muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
“Waxaan xallay sagootiyay guddi korjoogto ah oo tagi doona Maxkamada Caalamiga ah ee Cadaalada, guddigaan waxay halkaasi u tagayaaan inay la socdaan dacwada u dhaxaysa dalkeena Soomaaliya iyo dalka Kenya ee ku saabsan murranka badda, waxaan ku kalsoonahay inaan dacwadaasi ku guulaysan doono inshalaah”ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda u gudbisay dacwad ka dhan ah dowladda Kenya, oo ku xad gudubtay qeyb kamid ah Badda Soomaaliya.
XOG: RW CC oo Ololahiisa Doorashada ka bilaabaya Puntland & Gaas oo Xasan sh, u Ololeynaya…
Daawo Muuqaaladii Ugu Dambeeyay ee laga Soo qaaday Magaalada New York oo Qarax Xoogan uu Gil gilay
Aqri magacyada iyo qabaa'illada ay ka soo jeedaan Hor-joogayaal ka tirsan Xarakada Al-shabaab oo madaxyadooda lacago la dul-dhigey
Ciidamadda Ahlu Sunna oo lagu baaqey in ay Guriceel sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan.
admin 11th March 2015 28th August 2015
Shaqaalaha Kaawooyinka Dhagaxa ee Mandera oo lagu amray inay shaqada joojiyaan cabsi laga qabo Alshabaab.